Momba an’i Colombo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Aogositra 2019 18:25 GMT
Tsena mitsingevana, Colombo, Sri Lanka. SARIPIKA: Amila Tennakoon (CC BY 2.0)
Colombo no tanàndehibe lehibe indrindra sady renivohitra ara-barotra ao Sri Lanka.
Colombo ao amin'ny Wikipedia
Sri Lanka ao amin'ny Wikipedia
Colombo ao amin'ny Wikitravel
Sri Lanka ao amin'ny Wikitravel
Fandehanana any Colombo
Misy ny zotra an'habakabaka miala sy mankany Colombo izay atolotry ny zotram-pitaterana an'habakabaka nasionaly, Sri Lankan Airlines. Hita manerana an'i Eoropa, Etazonia, Azia atsimo Atsinanana, Aostralia, Shina, Japana, Afovoany Atsinanana, India ary Pakistan ity zotram-piaramanidina ity. Ahitana ny Malaysia Airlines, Qatar Airways, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Etihad ary Emirates ny zotra an'habakabaka hafa miaraka amin'ny fandalovana any amin'ny firenena afovoany atsinanana. Manana sidina mivantana avy ao amin'ny seranam-piaramanidina Gatwick mankany Colombo ny British Airways .
Ao Katunayake, akaikin'ny Negombo, any amin'ny morontsiraka avaratr'i Colombo no misy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena voalohany ao Sri Lanka, Bandaranaike International. Adiny iray raha mandeha taksy ny dia mankany Colombo amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana na atsasak'adiny raha tsy izany.
Ireto manaraka ireto ireo hotely mora handehanana (taksy) mankany amin'ny toerana hanaovana ny Vovonana any amin'ny TRACE Expert City :
Afaka mahazo visa maimaim-poana eo am-pahatongavana ireo teratany avy ao Maldives, Seychelles ary Singapaoro. Afaka mitsidika mandritra ny 30 andro (hatramin'ny 150 andro) ny teratany Maldiviana sy Singapaoreana , raha 60 andro kosa ho an'ireo teratany Seychelloà (saingy tsy mihoatra ny 90 andro isa-taona).
Afaka mangataka fahazoan-dalana elektronika amin'ny fivezivezena (ETA) ireo mpitsidika avy any Kamerona, Nizeria, Côte d'Ivoire ary Ghana na izany amin'ny alàlan'ny fangatahana izany any amin'ny Masoivoho Sri Lankey any ampitan-dranomasina akaiky indrindra na amin'ny alàlan'ny mpanohana Sri Lankey ao amin'ny Birao Foiben'ny Departemantan'ny Fifindra-monina sy ny Mpifindra-monina any Sri Lanka.
Afaka maka visa amin'ny aterineto amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fahazoan-dalana elektronika amin'ny fivezivezena (ETA) alohan'ny hahatongavana any Sri Lanka ireo teratany any amin'ireo firenena hafa tsy voalaza etsy ambony.